Dacwada Badda Soomaaliya iyo Kenya Oo La Muddeeyey, Akhriso Jadwalka Hadal-jeedinta Soomaaliya – Goobjoog News
Maxkamadda Cadaaladda adduunka, war saxaafadeed ay soo saaray waxaa lagu sheegay in sanadkan bisha September dib loo bilaabayo dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in maxkamadda ay ku dhageysan doonto dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya Peace Palace ee magaalada Hague. Soomaaliya ayaa dooneysa xadeynta cabbirka qalfoofta qaaradda ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed-u dhiganta- (370km) ee ka baxsan biyaha Soomaaliya.
Wareegga 1-aad: Isniinta oo ah 9-ka September 2019, 19-ka, 10: Subaxnimo ilaa 1:00 Duhurnimo iyo 3pm-4:30 Pm , waxaa la dhageysan doono dalka Soomaaliya, Arbaco: 11 September 2019, 10am-1-da PM iyo 3pm-4:30 Pm waxaa la dhageysan doonnaa Kenya.
Wareegga 2-aad: Khamiis, 12-ka September 2019, 3PM-6PM Soomaaliya, halka Jimco 13 September 2019, 3PM-6PM, la dhageyn-doonnoo dalka Kenya